Shirka Kismaayo shakiga laga qabo muxuu yahay? | TOP NEWS
Shirka Kismaayo shakiga laga qabo muxuu yahay?
By Tifaftiraha Somalida Maanta on October 9, 2017 No Comment
Waa madmadoowgaas uu sheegay wasiirka waxa dhaliyay shaki balaaran oo laga qabo shirkan iyo waxa kasoo bixi kara, sida uu sheegayo Xasan Xayle oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ay BBC-da weeydiisay aragtidiisa shirkan ku aaddan.
Shirka Kismaayo shakiga laga qabo muxuu yahay? added by Tifaftiraha Somalida Maanta on October 9, 2017